Soomaaliyey waxaan ahaan jirnay Mise Waxaa Aynu Nahay Hadda
Dadkaygoow Digniin Culus Ma Waxaan Ahaan Jirney Mise Waxaan Hadda Nahay
By Caalamka On Sep 13, 2019 Last updated Sep 13, 2019
Soomaaliya waxaan ahaan jirnay. Hal qabiil oo degan geeska Afrika. Waxaanan u noolaan jirnay qolo qolo ama jufo-jufo amaba jebsin wadaag.
Waxaan kaloo ahaan jirnay. Welina nahay dad sharaf jecel oo qabweyn. Balse aan wada indheer garad ahayn oo xoolo dhaqato ah.
Annagoo ah qabiil batay oo jilibyo iyo qolo qolo u farcamay. Ayaa dhulkeenii waxaa noogu yimid dad baahan oo raadinaya dhul qayraad leh.
Dadkaas xandho doonka ah oo arkay barwaaqada aan haysanno iyo in indheer garadku nagu yar yahay waxay noo qaybiyeen shan qaybood si ay awooddeena u kala dhantaalaan,.
Wayna iskukeen direen si kheyraadkeena ay u qaataan. Kala qaybintaasi waxay nabaday in nala gumeysto iyo jaahwareer nololeed.
Dagaal muddo dheer qaatay kadib shantii qaybood qaarbaa xoroobay laakiin kuwii xoroobay waxaa madax u noqday kuwii gumeysigu wax baray oo raacay siduu wax u maamuli jiray ee ahayd qaybi oo u tali.
Hogaamiyeyaasheenii isticmaalay tabahii gumeysiga si ay xukunka u haystaan way isku keen direen oo jufo jufo ayey iskaga keen horkeeneen.
Taasi waxay keentay in loo qaybsamay qolo dowladda dan ku qabta oo difaacaysa iyo qolo dowladnimada lagu dulmay oo la dagaalamaysa.
Dagaalkii dhexmaray labadaan qaybood wuxuu keenay in dowladdii ay burburto. Dalkuna dhex maquuro dagaal sokeeye oo dabadheeraaday.
Markii aan si xun u dhiig baxnay waxaa mar kale yimid shisheeye doonaya kheyraadka dalkeena ku jira iyo inuu nagu milo bulshooyin aynaan isku dhaqan iyo diin ahayn.
Shisheeyahani wuxuu adeegsanayaa. Madax aan eegeyn aayaha dadka Soomaaliyeed iyo waxa mustaqbalka dhici doona, waxayna weli wadaan qaybi oo u talidii aan ku hoognay.
Haddaba Soomaaliyey waxaan ahaan jirnay. Meesha aan maanta joogno waxaa nageeyey maangaabnimo iyo inaan arki weynay danteena guud iyo inaan nahay hal qabiil oo qolo qolo loo qaybiyey kadibna laysku diray.
Dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay kaga sugan yihiin Geeska Africa waxaa kusoo wajahan qatar aysan jirin qolo gooni uga badbaadaysa.
Haddii beri hore shisheeye hal qaarad ka yimid kugu soo duulay. Waxaa hadda duulaan kugu ah shisheeye qaarado badan ka yimid. Waxaana dhici doona wax ka xun wixii dhacay markii Soomaaliya shanta loo qaybiyey lana geliyey gumeysiga.
Haddaba si taas looga badbaado. Waxaa hoboon in hurdada laga kaco inta goori goor tahay. Waxaan ku talin lahaa in intii isku degaan ama isku heyb ahi.
Bal in ay is weydiiyaan sida laga yeelayo, masiibada soo wajahan iyo kaalinta iskaashi ee ay tahay. Inay la yeeshaan kuwa danta, dalka iyo dhalashadu kala dhexeyso.
Soomaaliyeey haddii laguu sameeyey qorshe buste la huwinayey, waa inaad samaysataa qorshe aad ku difaacayso jiritaankaaga. Haku halayn difaaca dalkaaga nin iibinaya.
Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy or position of Axadle Media Group. For publication please email your article alimusa@axadletimes.com. Thank You
AFEEF: Aragtida qoraalkan waxa ay ku gaar tahay qofka ku saxiixan, kamana tarjumeyso tan Axadle Media Group. Axadle waa mareeg u furan qof kasta inuu ku gudbiyo ra’yigiisa. Kusoo dir qoraaladaada alimusa@axadletimes.com Mahadsanid
Hogamiyaha Dalka oo kulamo doceedyo ka billaabaya New York
2 hours ago 1,422 0
Shariif annaga dalkaan waxbaa naga galay mana ogolin inuu…
2 hours ago 12,429 0
Toban muhaajiriin Iska Soo Dhigay Ciyaarto oo lagu Qabtey…
Sep 22, 2019 7,479 69
7 wadan oo Badda Cas oo dhoolatus militari ka bilaabay…
Sep 22, 2019 21,465
Ninkii Geystey Werarkii Masjid ku yaal…
Sep 22, 2019 21,454
Warar ka soo baxaya Safar Shariif ku…
Sep 22, 2019 12,705
7 Red Sea countries launch military…
Sep 22, 2019 12,406